Gabadh Injineerad Ah Oo Heer Caalami Ku Noqotay Nashqadaynta Masaajidada | Hawraar
September 24, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Gabadh Injineerad Ah Oo Heer Caalami Ku Noqotay Nashqadaynta Masaajidada
Haweenay lagu magacaabo Saynab Fadili Oglo, oo sida la sheegay da’deedu tahay sagaal iyo konton jir una dhalatay dalka Turkey ayaa ku guulaysatay, inay dejiso nashqada laba Masaajid oo mid ka mid ah laga dhisay dalka Qatar, ka kalana dhismihiisu gabo gabo ku dhow yahay, oo laga hir galinayo dalka Dajikistan.
Labadan masaajid ayaa qaabka ay u nashqadaysay in sida ay u dejisay in loo dhisaa noqdeen kuwo aad looga dhaygagay, waxaanay nashqadeedu isku darsatay, qaab dhismeedka Islaamiga qadiimka ah iyo hindisaha carsiga ah, kuwaas oo marka hab aqoon leh la isugu daro, soo baxay wax lagu indho daraan daro.
Saynab ayaa hore dalka Turkiga uga dhistay dhismayaal tiro badan, qaar kalana nashqadooda dejisay, laakiin waxa markii ugu horaysay ee ay caan baxday ahaa, sanadkii 2010-kii, wakhtigaas oo ay dejisay nashqada Masaajidka Sakirayn ee dalka Turkiga ugu quruxda badan wakhtigan, kaas oo laga dhisay magaalada Ankara.
Intaa ka dib waxa ay dejisay nashqada Masaajidka Dahabiga ah, kaas oo laga hir galiyay Magaalada caasimadda u ah dalka Qatar ee Doha, Masaajidkan ayaa noqday mid aad uga yaabiyay dadka daraaseeya dhismayaasha casriga ah iyo kuwii hore ee taariikhiga ahaa labadaba.
Sida muuqaalkiisa laga dheehan karo, waxa uu masaajidkani leeyahay qaybo faama laydho oo kale ah, oo u saamaxaya in falaadhaha qoraxdu si aan dadka dhibayn oo haddana ilays gudaha masaajidku ka helayo, ay uga soo galayaan, waxaana taasi meesha ka saartay kharash badan oo korontada masaajidka ku bixi lahaa.
Quruxda masaajidadan ay gabadhani nashqadaysay marka laga tago, waxa u dheer sida ay u dejisay, qaab dhismeedkooda, isla markaana uga qiyaastay dhinac kasta oo la xidhiidha nadaafada, tayada, dhaqaalaha iyo raandhiiska inta uu sii shaqayn karo.